OnePlus 7T vs OnePlus 7T Pro specs comparison! – DigitalTimes
OnePlus 7T vs OnePlus 7T Pro specs comparison!
OnePlus 7T Pro ကို မကြာခင်ကပဲ ကြေညာလိုက်ပြီ ဖြစ်ပြီး OnePlus 7T ထက် လုပ်ဆောင်ချက် အသစ်တွေနဲ့ ဟာ့ဒ်ဝဲ အသစ်တွေ ထည့်ထားပါတယ်။ နောက်ဆုံးထုတ် Snapdragon 855+ Chipset ထည့်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ၂ လုံးမှာ တူညီချက်တွေ အများကြီး ပါပါတယ်။ ဘယ်ဖုန်းရွေးရမလဲ စဉ်းစားရခက်နေရင်တော့ အောက်ပါ ဇယားကို လေ့လာကြည့်ပါ။
သူတို့ ၂ လုံးရဲ့ အဓိက ကွာခြားချက်က နည်းပါးပါတယ်။ Chipset ကလည်း တူညီပြီး Warp Charge 30T ကို သုံးထားပါတယ်။ ကင်မရာတွေက အများစုတူညီပြီး 7T ရဲ့ 12MP Telephoto Lens အစား 7T Pro မှာ 8MP Telephoto Lens ကို လဲထားပါတယ်။ Display , Battery န	ဲ့ Storage Options တွေကတော့ ကွဲပြားကြပါတယ်။ 7T Pro မှာ အနည်းငယ်ပိုကြီးတဲ့ ၆.၆၇ လက်မ Display နဲ့ ပိုကောင်းတဲ့ QHD+ Resolution ပါပါတယ်။ 7T Pro ရဲ့ 4085mAh Battery ကလည်း 7T ရဲ့ 3800mAh Battery ထက် ပိုကြီးပါတယ်။ 7T Pro မှာ ရွေးချယ်စရာ Storage Option မရှိပေမယ့် 7T မှာ ရှိပါတယ်။ 7T Pro မှာ Notch မပါဘဲ 7T မှာပဲ ပါပါတယ်။
အဓိက ကွာခြားချက်က ဈေးပါ။ 7T ဟာ 7T Pro ထက် ဈေးသက်သာပါတယ်။ 7T ရဲ့ တန်ဖိုးအနည်းဆုံး မော်ဒယ်က ၅၄၉ စတာလင်ပေါင်ပါ။ Pro Model ကတော့ ၆၉၉ စတာလင်ပေါင် ရှိပါတယ်။ အရွယ်ကြီးတာကို ကြိုက်ရင်တော့ Pro ကို ရွေးသင့်ပါတယ်။
တရုတ်မှာ ရောင်းပေးတော့မယ့် Honor 20 Lite (Youth Edition)
16MP Triple Cameras ပါတဲ့ ZTE Blade A7s ကို ကြေညာ